Thu, Apr 19, 2018 | 19:36:10 NST
अर्काको देशमा भाँडा माझ्नु भन्दा त आफ्नै देशमा खेत जोत्न राम्रो गाउँमा विदेश नजाने घर थिएनन् । सबै जना विदेश गएर फर्किंदा कमाएरै फर्किन्थे । मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो । गाउँमा खेतीपाती गरेर खर्च धान्न गाह्रो थियो । गरिखान न कुनै व्यवसाय न जागिर । मैले पनि विदेश नै जाने सोचेँ । कुकको कामका लागि सन् २०१० मा मलेसिया गएको थिएँ । कुकको काममा त तलब पनि राम्रै होला भन्ठाने । मलाई के थाहा र विदेशको दुःख । २९ वर्षको उमेरमा मलेसिया पुग्दा मलाई निकै कमाउन सक्छु भन्ने आशा थियो । त्यो सँगै गाउँमा विदेश जाने देखासिखी नै चलेको थियो । दलाललाई १ लाख ५ हजार रुपैया... पुरा पढ्नुहोस
​परदेशी र परिवारलाई सन्देश गाउँमा होस या बजारमा धेरै चर्चा वैदेशिक रोजगारीकै हुन्छ । कुरा सकारात्मक पनि हुन्छन् अनि नकारात्मक पनि । विदेशको कमाईले कसैले घर बनायो भने नगएको भए बनाउन सक्दैनथ्यो भनिन्छ अनि कसैको विदेशमै ज्यान गयो वा अङ्गभङ्ग भयो भने विदेश नगएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो भनिन्छ । यसैले दर्शाउँछ वैदेशिक रोजगारीको सकारात्मक र नकारात्मक पाटो । सरकारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक १५ सयदेखि २ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । ती मध्ये दिनकै कम्तीमा ३ जनाको लास भित्रिरहेको छ । जुन मृत शरीर, कमाउने ... पुरा पढ्नुहोस
वैदेशिक रोजगारीले महिलालाई शसक्त बनाएको छ रामप्रमेश मण्डल/सप्तरी । श्रीमान् विदेश गएपछि श्रीमतीलाई जिम्मेवारी थपियो, बोझ बढ्यो भन्ने कुरा आइरहन्छ । सामान्य रुपमा हेर्दा हो जस्तो पनि लाग्छ तर यसलाई सकारात्मक तरिकाले हेर्ने हो भने यसले महिलालाई सशक्त बनाउन भूमिका खेलेको छ । रोजगारीका लागि पुरुष विदेशिएपछि उनीहरुले गर्ने सबै कामको जिम्मेवारी महिलामा आएपछि महिलाहरुको सशक्तिकरणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको छ । महिला अधिकारको कुरासँगै महिलाको आर्थिक विकास रआर्थिक पक्षमा महिलाको पहुँचको लागि सबै पक्षबाट सहयोग हुनु आजको आवश्यकता हो ।... पुरा पढ्नुहोस
​‘झुक्याएर आफ्नै दिदी बेच्ने मेरो सालोलाई भलो नहोस्’ मेरी श्रीमतीलाई उनकै भाइले अवैधानिक रुपमा विदेश पठाए । त्यो पनि मसँग सल्लाहै नगरी । दुईचार पैसा कमाइने लोभ देखाएर बुढी भकी आफ्नै दिदीलाईपनि छाडेनन् । मेरी श्रीमती (पार्वती सुनार) अहिले त दूतावासमा आइपुगेकी छन् रे । बल्ल मन अलिकति भएपनि शान्त भएको छ । उनी दूतावासमा आइपुगेपनि मेरो मनमा दन्केको आगो भने पटक्कै निभेको छैन । मेरो सालोले खै सेतै कपाल फूलेकी बुढीले के कमाउँछे भनेर विदेश पठाए होलान् ? मेरो मनमा यही कुरा खेलिरहन्छ । म छोराबुहारी भेट्न काठमाडौं आएको थिएँ । श्रीमती घरमै थिइन् । मल... पुरा पढ्नुहोस
​मलेसियामा १० वर्ष : भारी बोक्नेदेखि पजेरो चढ्नेसम्म घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । कमाउनु पर्छ भन्ने मनमा लाग्थ्यो । तर, घरमा छउन्जेल पैसा कमाउनका लागि केही काम गरिन । सन् २००४ को कुरा हो । गाउँकै दलालले विदेशमा राम्रो कमाइहुने कुरा सुनाए । ‘दुःख गर्न पर्दैन मेसिनबाट झरेको फलाम खनखनी गर्ने हो,’ दलालले मलाई भनेको शब्द यही हो । सयकडा चारमा काढेको ८० हजार रुपैयाँ ऋण र विदेशमा खनखनी फलामा गनेर पैसा कमाउने सपना बोकेर म मलेसिया पुगेँ । भनेको काम किन पाइन्थ्यो । बिहानदेखि बेलुकासम्म भारी बोक्नुपर्ने काम पाइयो । ५० किलोका पो... पुरा पढ्नुहोस
टेन्सनले प्रेसर बढेपछि मलेसिया बस्न सकिन म २०५२ सालमा नेपाली सेनामा भर्ती भएँ । १६ वर्ष जागिर खाएर रिटायर्ड भएँ । मान्छेलाई जति भएपनि पुग्दैन भन्छन् । मलाई पनि त्यस्तै भएको होला कमाउन विदेश जाउँ भन्ने लाग्यो । मलेसिया गएँ सेक्युरिटी गार्डमा । यहाँबाट त मसँग अनुभव छ के गाह्रो होला र भनेर गएँ । तर विदेश कहाँ हामीले सोचे जस्तो हुने रैछ र । एक त विदेश त्यहीँमाथि सेक्युरिटी गार्डको काम । अरु काम पनि गाह्रै होला तर गार्डको काम झनै गाह्रो हुने रैछ । किनभने गार्डले अलिक कडा नै हुनुप¥यो । त्यसो गर्दा आफ्नै कम्पनीमा काम गर्ने साथीहरु ... पुरा पढ्नुहोस
हाम्रो समाज कति कुरुप छ भन्ने वैदेशिक रोजगारीका समस्या हेर्दा बुझिन्छ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका अधिकार र सुरक्षाका लागि काम गर्ने सिलसिलामा कामदार, तिनका परिवार, सरकारी अड्डा, अन्य सरोकारवाला र म्यानपावर कम्पनीसँग काम गर्ने अवसर मिल्यो । झण्डै ७ वर्ष काम गर्दा कामदारका साथै अन्य सरोकारवाला निकायका समस्या र कमजोरी जान्ने मौका पाएँ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकार, गैरसरकारी संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमहरुले काम गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ को छेक पारेर एउटा नारा बनाएर साताव्यापी कार्यक्रम गर्ने पनि गरिएको छ ।... पुरा पढ्नुहोस
वैदेशिक रोजगारीले बाआमालाई के दियो ? सदरमुकाम बस्नेहरुका लागि त्यो भन्दा ठूलो शहरमा बस्न पाए भन्ने सपना हुँदो हो । तर गाउँका मानिसलाई त सदरमुकामसम्म पुग्नु अनि सदरमुकाममा घडेरी जोडेर घर बनाउन सक्नु नै काठमाडौं पुगे जस्तै हुन्छ । यस्तै सपना रहेछ ९० वर्षका हजुरबुवाका छोराको पनि । त्यही सपना लिएर उनी विदेश गएको ६ वर्ष भयो । ९० वर्षका हजुरबुवाको परिवारमा एक मात्र छोरा बुहारी र एक जना नाती छन् । श्रीमती पहिल्यै बितेकाले हजुरबुवा तिनै छोराको सहारामा हुनुहुन्थ्यो । छोरा विदेश गएपछि बुहारीसँग बस्दै आएका हजुरबुवाकी बुहारी... पुरा पढ्नुहोस
इपिएसमार्फत कोरिया आएका प्रवासी मजदुरका कुरा कोरियामा इपिएसका नीतिका कारण प्रवासी मजदुर दिनप्रतिदिन पीडित हुँदै गइरहेका छन् । कोरियामा काम गर्न आउने प्रवासी मजदुरको संख्या बढ्दो क्रममा छ । संख्या बढेसँगै समस्या पनि बढी रहेका छन् । इपिएसमा सबै अधिकार रोजगारदातालाई हुन्छ । प्रवासी मजदुरलाई आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्नबाट बन्चित गराएर मजदुरका हकअधिकार माथि कुठाराघात गरिएको छ । त्यसैकारण रोजगारदाताबाट प्रवासी मजदुरले पीडित भएर दास भन्दा पनि तल्लोस्तरको जीवनयापन गर्नु परेको हो । कोरियामा कार्यस्थलमा प्रवासी मजदुरले भोग्... पुरा पढ्नुहोस